अर्थ–वार्ता – ZoomNP
निरन्तर घट्दो डलर रेट, कति पुग्यो आज आइतबार डलर लगायत सम्पूर्ण बिदेशिमुद्राको विनिमयदर?
निरन्तर घट्दै गएको डलर रेटमा सुधार आउदै, कति पुग्यो आज बिहिबार डलर लगायत सम्पूर्ण बिदेशिमुद्राको विनिमयदर?
Exchange Rate for 16 February, 2017
निरन्तर घट्दै डलर रेट, कति छ आज शुक्रबार डलर, दिर्हाम, रियल, रिंगेट लगायत सम्पूर्ण बिदेशिमुद्राको विनिमयदर?
Exchange Rate for 03 February, 2017
निगमले २२ अर्बमा खरिद गर्न लागेको जहाज पहिले नै दुर्घटनामा परेको !
माघ ३ । नेपाल वायु सेवा निगमले २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्न लागेको दुई जहाज मध्ये एक पहिले नै सामान्य क्रयास भएको दाबी गरिएको छ ।
दुर्घटनामा बायाँ पखेटामा क्षतिपुगेको जहाज पूर्ण मर्मत (एमआरओ) गरेर निगमलाई अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनले दिन लागेको स्रोतको दाबी छ । स्रोत भन्छ, ‘गाडीको चेसिज नम्बर जस्तै जहाजको एमएसएन नम्बर हुन्छ । एमएसएन नम्बर अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि दुर्घटनामा परेको जहाज हो...
दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीलाई खुशीको खबर, अब नेपाल वायुसेवा निगमले काठमाडौंबाट कोरिया सिधै उडान गर्दै
काठमाडौं, २१ पुस । नेपाल वायु सेवा निगमले पहिलो पटक दक्षिण कोरियामा सिधा उडान भर्ने भएको छ। कोरियाको राजधानी सोलस्थित इन्चेन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले प्रत्येक आइतबार र बुधबार उडान–अवतरण गर्न पाउने गरी निगमलाई स्लट उपलब्ध गराएको हो। यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ। हालसम्म कुनै पनि नेपाली वायुसेवा कम्पनीले कोरियाका लागि उडान गरेका छैनन्।‘इन्चेन विमानस्थलमा हामीलाई साताको दुई दिन उडान गर्ने गरी समय तालिकासहितको स्लट उपलब्ध गराएको छ,’ निगमका कर्पोरेट...
नेपाल राष्ट्र बैंकको चरम लापरबाही,नेपाली भाषाको घोर अपमान
काठमाडौं पुस ४ नेपाल सरकार र यस मातहतमा विभिन्न निकायहरुको काम देशको भाषा, संस्कृति,रीतिरिवाजको संरक्षण गर्दै आफ्नो लक्षअनुसारको कार्यसम्पादन गर्नुु हो । तर,देशको माथिल्लो नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले नै नेपाली भाषा बिगारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली भाषाको व्याकरणीय नियमको बेवास्ता गर्दै नयाँ नोट बजारमा ल्याएर भाषाको खिल्ली उडाएको छ ।
जसमा नेपाल राष्ट्र बैकको चरम लापरबाही देखिन्छ । नयाँ बीस रुपैयाँको नोटमा ‘बीस’ लेख्नुुपर्ने ठाउँमा ‘बिस’ लेखिएको...
डिजेल, पेट्रोल र मटि्टतेलको मूल्य बढ्यो! किन बढाइएको को हो त मूल्य?
३ पुस, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले तेलको मूल्य बढाएको छ । आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको हो ।
पेट्रेलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ५० पैसा मूल्य बढाइएको निगमका वितरण विभाग प्रमुख सीताराम पोखरेलले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ९७ रुपैयाँबाट अब पेट्रलको मूल्य बढेर १०१ रुपैयाँ ५० पैसा भएको छ ।
डिजेल र मटितेलमा लिटरको ४ रुपैयाँ ५० बढेर रुपैयाँ भएको छ । र, दुबैको मूल्य ७७ रुपैयाँ...